Giardiasis (ဂျီရာဒီရေးစစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Giardiasis (ဂျီရာဒီရေးစစ်)
သန့်ရှင်းမှုနည်းတဲ့နေရာတွေနဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေသောက်သုံးနေရတဲ့ နေရာတွေမှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ giardiasis ရောဂါအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီရောဂါဟာ အဏုမြူမှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်မှမြင်နိုင်တဲ့၊သေးငယ်တဲ့ giardia lamblia လို့ခေါ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
ဒီကပ်ပါးကောင်တွေဟာ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့၊ တောရွာလို နေရာတွေရဲ့ စမ်းချောင်းတွေ၊ ကန်တွေ၊ မှာအပြင် မြူနီစပယ် ရေပေးဝေမှုတွေ၊ ရေကူးကန်တွေ ၊ရေတွင်းတွေ မှာလည်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို giardia ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ထိတွေ့ခြင်း (သို့) အစားအစာ တွေမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်မွေးခွေး၊ ကြောင်လေးတွေမှာလည်း giardia ရောဂါပိုးမကြာခဏ အဝင်ခံရတတ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ရောဂါပိုးနဲ့ ထိတွေ့ထားတဲ့ အစားအစာ တွေကို စားခြင်း၊ အရည်တွေကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် giardiasis ရောဂါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီရောဂါက အရမ်းအဖြစ်များတဲ့ ရောဂါ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ မဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ဒီရောဂါကို ဖြစ်ဖို့အားပေးနေတဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချ ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Giardiasis ရောဂါရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ရောဂါ လက္ခဏာတွေကတော့-
Giardiasisရောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင် ရောဂါလက္ခဏာတွေ မပြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ မပြပေမယ့် ကပ်ပါးကောင်ကတော့ ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ ဆက်ရှိနေနိုင်ပြီး မစင်တွေမှ တစ်ဆင့် အခြားသူတွေဆီကို ပျံ့နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်။ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့သူတွေ ဆိုရင် ရောဂါလက္ခဏာတွေက ရောဂါပိုးထိတွေ့ပြီး တစ်ပတ်မှ သုံးပတ်အတွင်း ပြလာနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အရည်ဝမ်း ( တစ်ခါတစ်ရံ အနံ့ပြင်းပြီးဆိုးသော) ဝမ်းများ နှင့် ပျော့ပြီး ချွဲကျိသော ဝမ်းများ တစ်လှည့်စီ သွားခြင်း။
ဝမ်းဗိုက် အောင့်ခြင်း၊ ဖောင်းကားလာခြင်း။
ဝမ်းဗိုက်အတွင်း လေ တွေအရမ်းများနေခြင်း။
အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါ လက္ခဏာတွေထဲမှာ မပါတဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာ အချို့လည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ခုခု နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိလိုတာရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်မှာ အထက်ပါ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် (သို့)သိလိုတဲ့ အချက်တွေရှိနေရင် တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံသင့်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ဟာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုချင်း မတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်အခြေအနေအတွက် ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သေချာသိနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြဲတမ်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Giardia တွေကို တိရိစ္ဆာန်တွေ နဲ့ လူတွေရဲ့ မစင်တွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ giardia တွေဟာ အဲဒီ မစင်နဲ့ ထိတွေ့ကူးစက်ထားတဲ့ အစာ၊ ရေ နဲ့ မြေကြီးတွေမှာလည်း ရှင်သန်နေနိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ကပ်တွယ်နေထိုင်တဲ့ သက်ရှိရဲ့ ပြင်ပမှာလည်း အချိန်တော်တော်ကြာကြာ အသက်ရှင်နိုင်ကြ ပါတယ်။ အမှတ်တမဲ့ သတိမထားမိဘဲ အဲဒီ ကပ်ပါးကောင်တွေကို စားသုံးမိမယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ထိတွေ့ကူးစက်ခံထားရတဲ့ရေကို သောက်သုံးမိတာကတော့ ရောဂါပိုးဝင်တဲ့ အဖြစ်အများဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ giardia ကပ်ပါးကောင်တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ရေကန်တွေ၊ ရေအိုင်၊ မြစ် နဲ့ ချောင်းတွေ အပြင် စည်ပင်သာယာ ရေပေးဝေစနစ်၊ ရေတွင်း
ရေကူးကန်တွေ ၊ ရေကစားပန်းခြံတွေ စတဲ့နေရာတွေမှာ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ လယ်ယာ စိုက်ခင်းတွေမှ စီးဆင်းလာသောရေများ၊ အမှိုက်သရိုက်များ(သို့) တိရိစ္ဆာန် အညစ်အကြေးများ မှ စိမ့်ထွက်စီးဆင်းလာသော ရေများ မှ တစ်ဆင့် မြေအောက်ရေ နဲ့ အခြားမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေများကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေသုံးတဲ့ သေးခံတွေ၊ဝမ်းလျှောနေတဲ့ သူတွေက တစ်ဆင့်လည်း မတော်တဆ ရေကန်တွေနဲ့ အခြားရေတွေကို ကူးစက်ပျံ့ပွားသွားနိုင်ပါတယ်။
အစားအစာတွေမှ တစ်ဆင့် ရောဂါပိုးဝင်တာကတွေက အဖြစ်နည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အဲဒီရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ကပ်ပါးကောင်တွေက အပူကြောင့် သေနိုင်လို့ပါ။ မသန့်ရှင်းတဲ့ လက်တွေ နဲ့ အစားအစာ ကိုင်တွယ်ခြင်း (သို့) မသန့်ရှင်းတဲ့ ရောဂါပိုးထိတွေ့ထားတဲ့ ရေနဲ့ ဆေးကြောပြီး စားသောက်ခြင်းက ကပ်ပါးကောင်တွေကို ပျံ့နှံ့စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
သင့်လက်တွေကနေတစ်ဆင့် မစင်နဲ့ ထိတွေ့ကူးစက်သွားပြီးတော့လည်း ဒီ ရောဂါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကလေးလေးရဲ့ သေးခံတွေကို အမြဲတမ်းလဲလှယ်ပေးနေရတဲ့ မိဘတွေ ဟာ ဆိုရင် ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရောဂါအများအပြား ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း မြင့်မားတဲ့ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ တွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေ နဲ့ အဲလိုကလေးစောင့်ရှောက်ရေးနေရာတွေမှာ နေတဲ့ကလေးလေးတွေ ဟာဆိုရင်လည်း ဒီရောဂါ အဖြစ်များနိုင်ကြပါတယ်။
စအိုပေါက်ထဲထိုးသွင်းပြီး လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်လည်း ဒီရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Giardiasis ရောဂါဖြစ်ဖို့ အားပေးနေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ကလေးများ။ giardia ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဟာ လူကြီးတွေထက်စာရင်ကလေးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေဟာ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး နေရာတွေမှာ နေရတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကလေးသေးခံ တွေဝတ်ဆင်ရတဲ့ အတွက် မစင်တွေ နဲ့ အထိအတွေ့ပိုများပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ နေတဲ့သူတွေ (သို့) အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေ က giardia ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတွေဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများနိုင်ပါတယ်။
သောက်သုံးရေ သန့်ရှင်း လုံခြုံမှု မရှိခြင်း။
Giardiasis ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဟာ သောက်သုံးရေ သန့်ရှင်းမှု နည်းပါးတဲ့နေရာတွေ(သို့) မသန့်ရှင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြစ်ပွားမှုများပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာgiardiasis ရောဂါပိုးဝင်တာ အဖြစ်များတဲ့နေရာကို ခရီးသွားတယ်ဆိုရင် ( အထူးသဖြင့် သင်ဟာ သင်စားသောက်တဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သေသေချာချာ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်) သင့်အတွက် ရောဂါပိုးဝင်နိုင်ချေများပါတယ်။ အဲလို giardiasis ပိုးဝင်ခြင်း အဖြစ်များတဲ့ နေရာတွေကတော့ ရွာ(သို့) တောကြိုတောင်ကြားနေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
စအိုပေါက်ထဲသို့ ထိုးသွင်း လိင်ဆက်ဆံသူတွေ။
အကာအကွယ် ကွန်ဒုံးအသုံးမပြုပဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကလည်း ဒီရောဂါပိုး နဲ့ အခြားသော လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေတစ်ဆင့်ကူးစက် နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ ဝင်နိုင်ခြေပိုများစေနိုင်ပါတယ်။
မစင်ကို စစ်ဆေးခြင်း။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မစင်အား စစ်ဆေးချက်များ ပြုလုပ်ပြီး giardia ကပ်ပါးအောင်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Enteroscope ထည်ြ့ခင်း။ လည်ချောင်းထဲမှ တစ်ဆင့် အူလမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ပျော့ပြောင်းသော ပိုက်ထည့်သွင်းပြီး အစာလမ်းကြောင်းအား စစ်ဆေးပြီး အသားစ နမူနာယူသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့်တော့ giardiasis ရောဂါဟာ သူ့အလိုလို ပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါ ဆိုးနေပါက (သို့) ကြာနေပါက ဆေးသောက်ဖို့်လိုအပ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်အများစုကတော့ ရောဂါ သူ့အလိုလိုပျောက်သွားတဲ့ အထိ မထားဘဲ antiparasitic လို့ခေါ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်ကို သေစေနိုင်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့ ကုသဖို့ အကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်။ Metronidazole, Tinidazole, Nitazoxandine, Paromomycin အစရှိတဲ့ ပိုသတ်ဆေးတွေကို giardiasis ရောဂါကို ကုသဖို့ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အတွက်ကတော့ ဒီလို ပိုးသတ်ဆေးတွေက ကလေးလေးအပေါ်မှာ ဆိုးကျိုးသတ်ရောက်မှုတွေ ပေးနိုင်တာကြောင့် တသမတ်တည်း ဆေးပေး ကုသလေ့မရှိပါဘူး။ ရောဂါ လက္ခဏာ မဆိုးသေးပါက ဆရာဝန်က ကိုယ်ဝန်သုံးလပတ်ပြီး တဲ့အထိ အချိန်ဆွဲ ကုသ နိုင်ပါတယ်။ ကုသမှု လိုအပ်ပါက အကောင်းဆုံးကုသမှု ရရှိနိုင်အောင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် နိုင်ပါတယ်။
Giardiasis ရောဂါကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်သုံးဆေးနည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ?
အောက်ပါ နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်သုံးဆေးနည်းလမ်းတွေက သင့်အတွက် ဒီရောဂါကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရေစိမ်းတွေကို သန့်စင်အောင်ကျိုချက် သုံးပါ။
ရေကူးကန်တွေ၊ ရေကန်တွေ၊ စမ်းချောင်းတွေမှာ ရေကူးတဲ့အခါ ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားပြီး ရေကို မမြိုချမိအောင်နေပါ။
ရေသန့်ရေဘူးသောက်သုံးပါ။ သောက်ရေ၊ သုံးရေ မသန့်ရှင်းတဲ့ နေရာဒေသတွေဆီကို ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ရေသန့်ရေဘူးနဲ့ပဲ သောက်သုံးပြီး၊ ရေသန့်ရေဘူးနဲ့ပဲ သွားတိုက်တာတွေလုပ်ပါ။ ရေသန့်ရေဘူးကလည်း ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲခါမှ ဖွင့်ဖောက်တာမျိုး ဖြစ်ပါစေ။ အရင်ကတည်းက ဖောက်ထားပြီး ၊ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဖောက်ထားတာမျိုး မဟုတ်ရင် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ အကာကွယ်ပါပြီး လုံခြုံတဲ့ ဆက်ဆံမှုမျိုး ဖြစ်ပါစေ။
သေချာ မသန့်စင်ထားတဲ့၊ (သို့) မကျိုချက်ထားတဲ့ ရေတွေကို မသောက်သုံးပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 23, 2018
Giardiasis. http://www.healthline.com/health/giardiasis#Treatment5. Accessed January 11, 2017.
Giardia infection (Giardiasis). http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/giardia-infection/basics/prevention/con-20024686. Accessed January 11, 2017